Daawo Mu’asasada Al-kataa’ib Oo Soo Saartay Filim Uu Kasoo Muuqday Maxbuus Kenyaati Ah. – Calamada.com
Daawo Mu’asasada Al-kataa’ib Oo Soo Saartay Filim Uu Kasoo Muuqday Maxbuus Kenyaati Ah.
calamada April 2, 2017 3 min read
Mu’asasada Al-kataa’ib ee garabka Warbaahineed ee Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa soo saartay Filim cusub oo uu kasoo muuqanayo askari Kenyaati ah oo ka mid ahaa askartii Nasaarada Kenya looga qabtay dagaalkii Ceelcadde.
Askarigan kasoo muuqday filimka ayaa fariin u diraya ehelkiisa dowladiisa iyo guud ahaan shacabka Nasaarada Kenya.
Halkan Hoose Ka Akhriso Tarjumada Fariinta Askariga Kenyaatiga ah.
Magaceyga oo dhameystiran waa David Ngugi Wataari, Waxaan ahay askari Kenyaan ah oo ka tirsan guutada 120aad ee madaafiicda, Waxaana ku dhashay gobalka Kiyaambu ee dalka Kenya. Markale waxaan heystaa fursad aan idinkula hadlo hadaad tihiin dadka reer Kenya, anigoo dalbanaya caawinaadiina. Â Sidaad ogtihiinba, 15-kii bishii January ee sanadkii la soo dhaafay Waxaa magaalada Ceel-cadde nagu soo weeraray Al-Shabaab kuwaas oo ugu dambeyntii saldhigeena iqtixaamay, cagtana mariyey xerada iyo wixii ku jiray. Qaar badan oo saaxiibadeena ah wey dhinteen, Anaguna Al-Shabaab ayaa gacanta nagu dhigay, anagoo maxaabiis dagaal ah.
Si kasta oo ay noqotaba waxa in badan iga yaabiyey ayaa ah in laga soo bilaabo waqtigaas ilaa maanta oo laga joogo muddo 15 bilood ah in aanan wax hadal ah ka maqal dowlada Kenya. Suâ€™aasheydu waxay tahay: Kuma ayaa na keenay Soomaaliya. Shaki kuma jiro in halkan ay na keentay dowlada Kenya.
Halkan Ka Doono Filimka.
Previous: Halkan Ka Dhageyso Faafreebka Wararka 06-07-1438Hijri.
Next: Askarta Dowlada Oo Muqdisho Lagu Weeraray.
1 thought on “Daawo Mu’asasada Al-kataa’ib Oo Soo Saartay Filim Uu Kasoo Muuqday Maxbuus Kenyaati Ah.”
Uhuurow erey gaygu ma ahayn afka sheegee
Akhbaar weeye saxiixo ajashayda horteed
Eega aan ku dan sheegtay hadii aad aqli leedoo
Anaana weeye war kayguye abhiye aayar dhuux